Indawo yokuhlala eJABZÓWKA
Turzyniec, Lubelskie, Poland
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMałgorzata
ISiedlisko Jabzówka yindlu yamaplanga eneminyaka engama-70 ubudala ekwilali entle yaseTurzyniec, ekwiikhilomitha ezi-4 ukusuka eZwierzyniec. Ilali, ejikelezwe ngamahlathi eRoztocze, imilingo enemiwonyo enqabileyo, intlambo yoMlambo iWieprz kunye neendawo ezintle zamasimi asalinywayo.
I-cottage ihlaziywe ngononophelo olukhulu kunye nothando, isebenzisa izinto zendalo. Ngaphakathi, i-microclimate enempilo iqinisekiswa ngeendonga ezigqunywe ngodaka lwendabuko, imigangatho yeplanga kunye neefestile zamaplanga zasemaphandleni.
I-Siedlisko Jabzówka yindlu enendawo emalunga namashumi asibhozo m2, ngezantsi kukho igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nekhitshi elikhulu elinesitovu esifakwe iithayile, kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elitofotofo.
Phezulu kukho indawo ephakamileyo efana ne-loft-type-loft eneebhedi ezimbini, kunye netafile yekofu yokucamngca imbono yefama kunye nehlathi.
Umtsalane owongezelelweyo weJabzówka yiBarn Cinema Brzask yeemitha ezintandathu ukuphakama, apho ungalungiselela ubusuku, umdlalo webhodi okanye umboniso wefilimu oyithandayo (sibonelela ngeprojekti ngesicelo).
ISiedlisko ibandakanya indawo ebiyelweyo ekhuselekileyo enendawo yeeare ezingamashumi amabini kunye nendawo yomlilo.
Umbuki zindwendwe ngu- Małgorzata